Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Sydney dia mamarana ny fihidiana COVID-19
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Bebe kokoa ny hantsana hialana amin'ny faran'ny volana oktobra, raha vantany vao mahatratra 80% ny mponina 16 taona no ho miakatra dia vita vaksiny tanteraka. Na izany aza, ireo tsy voadinika dia tsy maintsy miandry ny 1 desambra vao mankafy ny fahalalahana vaovao.
Sydney, Aostralia dia nanamaivana ny fameperana rehefa avy nahatratra 70 isan-jaton'ny lasibatry ny vaksinin'ny mponina mendrika.
New South Wales dia nanalefaka fetra maromaro ho an'ireo mponina vita vaksiny tanteraka.
Ny olona vita vaksiny tanteraka dia afaka mivondrona amina vondrona misy olona 10 ao an-trano, na vondron'olona 30 any ivelany, raha misy vondrona misy 100 avela hanatrika fampakaram-bady sy fandevenana.
Taorian'ny nahavoazana ny 70% n'ny olona mendrika vita vaksiny tanteraka, tanàna lehibe indrindra ao Aostralia, Sydney, namarana ny hidiny COVID-19 efa ho efa-bolana androany.
Dominic Perrottet, praiminisitra New NSW
Ny fanjakan'ny Wale South News sy ny renivohiny raha Sydney, nanamaivana fetra maromaro ho an'ireo vaksiny feno ihany, anisan'izany ny famelana ny fitsidihana trano hafa sy fidirana amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana antsinjarany, sinema ary gym izay misokatra miaraka amin'ny satroka henjana henjana.
“Lazaiko amin'ny olona rehetra anio, New South Wales, azonao izany, ”hoy ny praiminisitra Dominic Perrottet nanambara.
Raha voafetra ny famerana, ny olona vita vaksiny tanteraka dia afaka mivondrona amina vondrona 10 ao an-trano na 30 any ivelany, raha vondrona 100 kosa no afaka manatrika mariazy sy fandevenana. Ireo ao amin'ny Greater Sydney ny faritra koa dia afaka mandeha mihoatra ny sisin-tanin'ny filankevitra eo an-toerana na 5 kilometatra miala ny tranony voalohany hatramin'ny Aogositra.
"Ny vondrom-piarahamonina dia nanao asa mahafinaritra hahatratrarana ny tanjon'ny doka avo roa heny amin'ny 70 isan-jato, saingy tokony handeha hatrany isika. Tianay ny hanatonana vaksiny avo roa heny isan-jato araka izay azo atao mba hitandroana ny filaminana hatrany ”, hoy ny minisitry ny fahasalamana any New South Wales Brad Hazzard.
Mahatonga ilay fiovana New South Wales ny fanjakana Aostraliana voalohany nivoaka ny fanidiana tsy namongorana ny fifindran'ny virus ny vondrom-piarahamonina, taorian'ny fipoahan'ny Delta variant tamin'ny volana jona dia nanary ny fanantenana ny hanohizana ny paikady fanafoanana nahomby izay notadiavin'i Aostralia ho an'ny ankamaroan'ny areti-mandringana hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020.